Okokuqala Bitcoin yezimayini Ikhamphani eserhelweni ku Tel Aviv Stock Exchange - Blockchain Izindaba
Okokuqala Bitcoin yezimayini Ikhamphani eserhelweni ku Tel Aviv Stock Exchange
Canadian izimayini cryptocurrency ngokuqinile Bitfarms kuqede ekubumbaneni yayo inkampani Tel Aviv-efakwe ohlwini waphenduka nkampani yezimayini mfihlo Blockchain Imayini Ltd., umemezele wokufaka kuya Tel Aviv Stock Exchange Sunday.
Nokuhlanganiswa kudala inkampani yokuqala nge cryptocurrency njengoba ibhizinisi layo core ukuba ohlwini phezu exchange.
Izinkampani ezimbili zokuqala wamemezela ekubumbaneni idili-futhi plan uhlu phezu Tel Aviv Stock Exchange njengoba inkampani-ngoDisemba mfihlo-egxile 2017, kodwa babhekana kokuhlolisisa kusukela Regulator Israeli. ngoMashi, izinkampani wamemezela ukuthi i-Israeli Securities Authority sesiqedile uphenyo mayelana nokuhlanganiswa.
Bitfarms usebenza izindawo ezine esifundazweni Quebec futhi okwamanje ekwakheni yesihlanu Computing isikhungo.
MasterCard sika-CFO: Cryptocurrency ukuthenga ekufukuleni ikhasimende imali yethu
Mastercard oboné ...
Previous Post:Coinsource is zokuphaka Bitcoin ATM
Next Post:Mastercard isebenzisa blockchain ukulwa ama-ID inkohliso